China PP Spunbond Shiillada aan-Loogin Dhammaanba ee Warshadaha Masks iyo soosaarayaasha | ShiningPlast
Waxaan soo saareyno oo aan bixinayno Polypropylene Spun-bond marada aan la adeegsan sannadihii la soo dhaafay. Intii lagu guda jiray Cudurka Faafa ee COVID-19, PP Spun-bond dharka aan la soo saarin ee laga soo saaray warshadeena ayaa loo adeegsaday dhammaan noocyada waji-ka-waji iyo aagagga ka hortagga faafidda.
Qalabka: 100% Polypropylene
Teknolojiyada: S, SS
Ballac: 17.5cm, 19.5cm, 20cm, 25cm, 26cm ama sidii loo habeeyey
Cabbirka: 6 '* 8' / 8 '* 8' / 8 '* 10' Max illaa 100 '* 100'
Daabacaadda: Ilaa 4 midab
Tayadayaga pre-been been abuur ah ee PP spunbond non-dhoomaal duudduuban ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee been abuurkaaga ah ee alaabta maaskaro wejiga. Dhammaan noocyada miisaanka dharka ayaa la heli karaa si loo daboolo baahiyahaaga.
· Shayga 100% Polypropylene
· Teknolojiyada S, SS
Ballaadh 17.5cm, 19.5cm, 20cm, 25cm, 26cm ama sidii loo habeeyey
· Midab Sida macaamiishiiba codsadaan
· Cabbir 6 '* 8' / 8 '* 8' / 8 '* 10' Max illaa 100 '* 100'
· Daabacaadda Ilaa 4 midab
Xirmooyinka Caadiga ah:
Isalaaban oo leh 2 "ama 3" waraaqda xudunta gudaha iyo polybag banaanka ah.
· Neef Kicin kara: Maaddada "polypropylene Spun-bond" Dharka aan la goyn karin waa la neefsan karo, oo si weyn loogu isticmaalo maaskaro wajiga.
· Anti-bakteeriyada: waxay ka hortagtaa gudbinta bakteeriyada ku faafo dusha sare.
· Jilicsan: PP Spun-bond maraq aan jilicsanayn waa jilicsan tahay sida maaskaro maaskaro oo aad u saaxiib ah maqaarka.
· Deegaanka u habboon: Maaddooyinka polypropylene-ka ah waa la-karaahi karaa. Waa jawi saaxiibtinimo.
Hore: Naqshadeynta Filimka Neefsiga leh ee PP Spunbond Oo Aan Loo Xiranayn Dhoola-tusmo Kala Duwan Go'yaha Ilaalinta
Xiga: Xaashiyaha Leno Scaffold
Beerta Aan La Jirin